Amabhizinisi endawo nabantu ngabanye - odokotela bamazinyo, abasebenza ngamapayipi amanzi, izitolo zezingubo, izitolo ezisebenza ngogesi — abanaso isidingo esiphuthumayo sokubeka phezulu kakhulu ekusesheni komhlaba ukuheha amaklayenti avela kolunye uhlangothi lomhlaba, noma aphume ezweni lawo. Badinga ukuphuma phambili kuphela lapho othile ebheka "odokotela bamazinyo eSeattle" noma "abasebenza ngamapayipi aseMadison." Yilapho i-SEO yendawo ingena khona.
Ngephakeji le-SEO lomhlaba wonke / likazwelonke, kusobala ukuthi uncintisana nezinkulungwane zamanye amawebhusayithi (uma kungenjalo) ashisa ngezabelomali ezinkulu ukufeza amazinga aphezulu. Uma kukhulunywa nge-SEO yendawo, umncintiswano wehliswa khona manjalo waba yizinhlangano ezimbalwa namawebhusayithi. Lokhu kungenxa yokuthi amagama angukhiye owakhombayo aba “ngokuqondene nendawo,” okuyinzuzo enkulu (sibonga ngokwengxenye ubuhlakani beGoogle).
Umbiko weMicrosoft ngo-2010 wathi abasebenzisi be-smartphone banamathuba amaningi okuguqula ngokushesha. Kulo nyaka, uNielsen ubike ukuthi cishe u-64% wokuseshwa kwama-smartphone restaurant kuguqulwe kungakapheli ihora. Iphuzu elibalulekile lapha ukuthi konke lokho bekungukusesha kwasendaweni kohlu lwasendaweni. Amabhizinisi endawo athola amazinga wokuguqulwa angcono ngemiphumela yosesho lwendawo. Lokhu akusebenzi nje kuphela ku-ecosystem ye-smartphone kepha kuwo wonke amadivayisi abantu abawasebenzisayo ukusesha ku-Google ukuthola uhlu lwamabhizinisi endawo.
Yilapho kuba ngcono nakakhulu. Njengezinsizakalo zendabuko ze-SEO, lapho uchwepheshe engathola khona amathuluzi nezinsiza ezahlukahlukene zokuphatha inqubo ngempumelelo, kunezinsizakalo ezifana Isitholi se-Whitespark's Citation Finder, Yext (eyenza futhi ilawule izingcaphuno kunqwaba yezinkomba), namanye amathuluzi amaningi okusiza imizamo ye-SEO yasendaweni.
Kungahle kube namathuluzi wegama elingukhiye angcono, acebile kakhulu, kepha ngazo zonke izinhloso ezisebenzayo, ezakwaGoogle Ithuluzi elingukhiye uphendula izidingo ezibaluleke kakhulu zocwaningo lwamagama asemqoka. Ithuluzi lisebenza ngezindlela eziningi futhi lihle kakhulu uma ufuna ukuncintisana okususelwa endaweni nedatha yevolumu yokusesha.